Yamin, Author at Chelmo News Portal
ဇူလိုင်လ(၆)ရက်နေ့မှာတော့ ကောင်မလေးတွေ အသည်းစွဲ မင်းသား Woo Do Hwan က စစ်မှုထမ်းသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်လေးအတွင်းမှာ သူ့ကို အလွမ်းပြေပြန်ကြည့်လို့ရအောင် သူ့ရဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ The Divine Fury ဒီဇာတ်ကားလေးက ရုံတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး မင်းသား Park Seo Joon နဲ့အတူ ...
Relationship တစ်ခုရဲ့ (၈၃)ရာခိုင်နှုန်းလောက်က သူငယ်ချင်းကို ချစ်သူအဖြစ် ရွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ အချိန်ကြာကြာ ခင်လာတဲ့ သူငယ်ချင်းအဖြစ်ကနေ ချစ်သူအဖြစ်ကို ပြောင်းလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ အစပိုင်းတော့ လက်တွဲရမှာ၊ ဖက်ရမှာရှက်တာတို့ ရှိတတ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်း သူငယ်ချင်းကနေ ချစ်သူဖြစ်ဖို့ဆို စဉ်းစားရမှာက ပြတ်သွားခဲ့သည်ရှိသော် သူငယ်ချင်းရော၊ ချစ်သူရောပါ ဆုံးရှုံးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ...
ဒီတစ်ခါတော့ သဘာဝဆန်တဲ့ အလှတရားနဲ့ သဘာဝကျကျသရုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ ပရိတ်သတ်အချစ်တွေ အများကြီးရထားတဲ့ Kim Go Eun ရဲ့ လူကြိုက်များတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ ကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ပရိတ်သတ်ကြီး ကြည့်ဖူးတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ ဘယ်နှစ်ကားလောက်ပါမလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ 1. Eungyo ဒီဇာတ်ကားကတော့ Kim Go Eun ဆိုတဲ့ မင်းသမီးချောလေးကို ...
အားကစားနေ့တိုင်းလုပ်ပါ ကျန်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးရဖို့ဆို အားကစားလုပ်ဖို့က မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်နော်။ မနက်ထပြေးတဲ့ အကျင့်လေးကို လေ့ကျင့်ပေးသွားပါ။ တခြားကိုယ်နဲ့ အဆင်ပြေတဲ့ အားကစားတွေလည်း လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။ အစားအသောက်ဂရုစိုက်ပါ ကျန်းမာတဲ့အစားအသောက်တွေ နေ့တိုင်းစားပေးပါ။ အသီးအရွက်ပါတာကို ပုံမှန်စားပေးပြီး ထမင်းစားပြီးချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် အဆာပြေစားတာပဲဖြစ်ဖြစ် အသီးတွေစားပေးပါ။ အသီးစားပေးတာက ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းကောင်းပြီး အသားအရေလည်း ကောင်းစေပါတယ်။ ကျန်းမာတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ဖို့က အစားအသောက်ကို ...
ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေက တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ လူကြိုက်များအောင်မြင်ကြသလို အဲ့လိုအောင်မြင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေထဲက နာမည်ကြီး မင်းသား၊ မင်းသမီးတွေက အပိုင်းတစ်ပိုင်းစီကို ဘယ်လောက်လောက်ရလဲဆိုတာ အားလုံးပဲစိတ်ဝင်စားကြမယ်ထင်လို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ 10.Park Shin Hye ငယ်ငယ်လေးထဲကနေ သရုပ်ဆောင်လောကထဲဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရရှိနေတဲ့ မင်းသမီးချောလေး Park Shin Hye ကတော့ Drama တစ်ကားရိုက်ရင် အပိုင်းတစ်ပိုင်းစာကို ...
Kdrama ချစ်သူပရိတ်သတ်ကြီးတို့အတွက် ဇွန်လထဲမှာ ထုတ်လွှင့်သွားမယ့် ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်နော်။ 1.My Unfamiliar Family ဒီကားလေးကတော့ သူငယ်ချင်းနဲ့မိသားစုကြားက ဆက်ဆံရေးတွေကို အဓိကထားပြီးရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကသရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ မင်းသမီး Han Ye-ri ကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ သူက ဒီကားထဲမှာ မိသားစုတစ်စုရဲ့ ဒုတိယမြောက်သမီးဖြစ်ပြီး သူ့မိသားစုနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီးမနေတတ်တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မိသားစုက သူ့အတွက် သူစိမ်းဆန်သလို ...
မေလ(၂၈)ရက်နေ့မှာ မင်းသား Jung IL Woo က Lee Min Ho ရဲ့ “The King: Eternal Monarch” ရိုက်ကွင်းကို Pizza Truck ပို့ပြီးအားပေးခဲ့ပါတယ်။ “မင်ဟိုရေ..မင်းအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပင်ပန်းသွားခဲ့ပြီ” ဆိုပြီး စာလေးလည်း ရေးထားပါသေးတယ်။ Jung IL Woo ...
လီမင်ဟိုရဲ့ လူကြိုက်များပြီး အရမ်းအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ Drama(၅)ခု
လီမင်ဟိုက ကောင်မလေးတွေရဲ့ အချစ်ဦးလည်းဖြစ်ခဲ့ပြီး ထွက်သမျှDramaတိုင်းကလည်း နိုင်ငံတကာမှာပါ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လီမင်ဟိုရဲ့ အမာခံ ပရိတ်သတ်တွေ ဘယ်နှစ်ယာက်လောက်ရှိမလဲဆိုတာ ဒီDrama(၅)ခုလုံး ကြည့်ဖူးလား ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်.. 1.Boys Over Flower လီမင်ဟိုဆိုပြီး ရင်ထဲပထမဆုံးရောက်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပေါ့နော်။ F4 လေးယောက်ရဲ့ ပုံရိပ်တွေက အခုထိ ပရိတ်သတ်ရင်ထဲနေရာယူထားတုန်းပါပဲ။ ...
လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရောင်တွေ ကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။ အဲ့လို မတူညီတဲ့အရောင်တွေပေါ် အခြေခံပြီး လူတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ (၁) အနီရောင် အနီရောင်ကြိုက်တဲ့သူတွေက ရဲရင့်ပြီး ပြတ်သားကြပါတယ်။ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ အားအင်အပြည့်ရှိတဲ့ သူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ စူးစမ်းလေ့လာရတာကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့သူတွေ ဖြစ်ပြီး ရည်မှန်းချက်တွေ၊ စိတ်အားထက်သန်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေသူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ...
အခုလို ပူတဲ့ရာသီမှာ ခဏခဏ ရေချိုးချင် စိတ်တွေရှိနေကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ရေချိုးတော့မယ် ဆိုရင် ပထမဆုံး နားလည်ရမှာက မိမိ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်တွင်း အပူတွေဟာ မှန်ကန်တဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ ထွက်သွားနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ပထမဆုံး ရေချိုးတော့မယ်ဆိုရင် ဘယ်ခြေ ဖမိုး ကနေ ပေါင်းရင်းအထိ ရေကိုလောင်းပါ။ အေးသွားပြီ ...